MSI Creator Awards မှာ ဒီဇိုင်နာနဲ့ Video Editor တွေ ဝင်ပြိုင်နိုင်ပြီ
2D Graphics Design တွေနဲ့ 3D Animation အပိုင်းတွေမှာ ဘယ်လောက် ကျွမ်းကျင်ကြောင်း Skill ပြချင်ပါသလား? အဲ့လိုမှမဟုတ် Video Editing မှာလည်း လေ့လာထားတဲ့ ပညာစုံနေတယ်၊ ဒီ Category ၃ မျိုးလုံးမှာ Creative Skill လည်း ရှိထားတယ်ဆိုရင် စိတ်ဝင်စားစရာ MSI Campaign နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
ကျင်းပသွားမယ့်ပုံစံက ရိုးရှင်းစွာနဲ့ပဲ Online Contest ဖြစ်ပြီး ဝင်ပြိုင်ချင်တယ်ဆိုရင် ဘာတွေသိထားရမလဲ ဖော်ပြသွားပါမယ်။ တကယ်လို့ Voting ရွေးပြီး အနိုင်ရမယ်ဆိုရင် MSI ပေးအပ်သွားမယ့် Creator အမျိုးစား Prestige Laptops ၊ Creator Monitors နဲ့ i9-9900K + RTX 2080 Ti Creator ပစ္စည်း အလန်းတွေ ရမှာမလို့ပါ။
အွန်လိုင်းပြိုင်ပွဲဆိုပေမယ့် စည်းစနစ်ကျနပြီး ယှဥ်ပြိုင်သူတွေ အနေနဲ့ လုပ်ရမယ့် တာဝန်က 2D ဖြစ်စေ 3D Graphics Design နမူနာ တစ်မျိုးမျိုး ဒါမှမဟုတ် Edit ကိုင်ထားတဲ့ Video တစ်ပုဒ် စသဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ Channel ဆီ ပို့ပေးရမှာပါ။
အရင်ဆုံး ဘယ်လို Format မျိုးကို လက်ခံလဲ? အရည်သွေးပိုင်းနဲ့ ကန့်သတ်ထားတဲ့ Submission Form ကို ပြောရရင်
အနည်းဆုံး 1920 x 1080 Resolution ရှိရမှာဖြစ်ပြီး jpg ၊ jpeg ဒါမှမဟုတ် png Format တွေမှာ 25MB ထက်မနည်း 300dpi နဲ့ ထုတ်ရပါမယ်။ #CreatewithMSI နဲ့ #2DwithMSI hashtags ကိုပါ တွဲပေးရပါမယ်။
Animation နဲ့ ဗီဒီယိုက ၁ မိနစ်ထက် မပိုရပဲ mp4 ၊ mov ၊ mpeg ၊ mpg နဲ့ avi နှစ်သက်ရာ Format နဲ့ ထုတ်နိုင်တယ်။ 1920 x 1080 Resolution အနိမ့်ဆုံး ရှိရမှာဖြစ်ပြီး 1,000MB Size ထက် မပိုရပါဘူး။ #CreatewithMSI နဲ့ #3DwithMSI ထည့်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့ဦး။ Video သမားဆိုရင်တော့ #VideowithMSI ရေးပေးရမှာပါ။
မှတ်ချက်။ ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးထားတဲ့ လက်ရာကိုသာ လက်ခံတာကို မမေ့ပါနဲ့
စာဖတ်သူတွေ အနေနဲ့ အရည်သွေးပိုင်း သိထားရမယ့် အချက်တွေ သဘောပေါက်ထားရင် ဒုတိယ ဖော်ပြချင်တာက MSI Creator Awards မှာ ဘယ်လိုဝင်ပြိုင်နိုင်မလဲ ဆက်သွားပါမယ်။
Online Contest နဲ့ ပတ်သက်ပြီး MSI ညွန်းချက်များ
နံပတ် ၁ အရေးကြီးဆုံးက hashtag ထည့်ကို ထည့်ပေးရမယ့် တာဝန်ဖြစ်ပြီး ဒီဇိုင်းပဲဆွဲဆွဲ ၊ ဗီဒီယိုပဲလုပ်လုပ် #CreatewithMSI #2DwithMSI #3DwithMSI #VideowithMSI စာလုံးတွေ ရေးပေးပါ။ ဒုတိယ အချက်ကတော့ တင်သွင်းမယ့် နမူနာကို ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြရမှာပါ။ နို့မို့ သူများကျော်လိုက်ရင် သွားပြီလေး။
Terms & Conditions မှာ အရေးကြီးတာ ဒီ ၂ ချက်ပါပဲ။ ပြိုင်မယ်ဆိုရင် 2D Graphic Design ၊ 3D Animation နဲ့ Video ၃ မျိုးထဲက ၁ ခုကိုပဲ ရွေးခွင့်ရှိမယ်။ ရွေးချယ်ပြီးသွားလို့ ဓာတ်ပုံ ၊ ဗီဒီယိုလုပ်မယ်ဆိုရင် MSI Content Creation Logo ပါကို ပါရပါမယ်။ ဒီ Link မှာ Logo ကို သွားယူနိုင်ပါတယ်။
Animation နဲ့ Video အတွက် ဘယ်လို Quality မျိုးလိုချင်တာလဲ သိရဖို့ Sample Video အတိုလေးပါ တွဲပေးလိုက်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Submission လုပ်မယ်ဆိုရင် ဆောင်ရွက်နိုင်မယ့် နည်းလမ်း ၂ လမ်းကိုလည်း ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ပထမတစ်နည်းက ကိုယ့်ရဲ့ Instagram ၊ Twitter Social Media တစ်ခုခုမှာ ဖန်တီးထားတဲ့ လက်ရာကို Public လုပ်ပြီး Upload တင်နိုင်မယ်။ အဲ့ဒီမှာ သတိထားရမှာက #CreatewithMSI အရင်ရေးပြီးမှ သက်ဆိုင်ရာ hashtag ဖော်ပြပေးပါ။ (Facebook ကို လုံးဝလက်မခံပါ)
ဒုတိယတမျိုးကတော့ Submission Form နဲ့ ဒီ Link မှာ ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။
အားလုံးပြီးသွားရင် သိထားရမယ့် Deadline က မေလ ၁၃ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး ပို့ပေးရပါမယ်။ Public Vote ကို ၁၄ ရက်နေ့မှာ ကြေညာပေးမှာဖြစ်ပြီး ဆုချီးမြင့်မယ့်ရက်က မေလ ၂၁ ရက်ပါ။
MSI Creator Awards တွေက
2D – MSI Prestige 14 Notebook ၊ LaCie d2 Professional 6TB External HDD
3D – Prestige PS341WU 5K Monitor with 8ms GTG ၊ Nano IPS Panel နဲ့ i9-9900K ၊ 32GB RAM ၊ RTX 2080 Ti Graphics နဲ့ ဆင်ထားမယ့် Prestige P100 Desktop Couple
Video – Artlist and Artgrid ၊ Prestige 14 Notebook ၊ ELGATO Stream Deck တို့ပါ။
Most Popular – ရေပန်းအစားဆုံး Creation ကိုတော့ Prestige Lineup ရဲ့ PS341WU Creator Monitor ပေးအပ်သွားမှာပါ။
အသေးစိတ် သိချင်တယ်ဆိုရင် ဖော်ပြပါ Link Click နှိပ်ပြီး လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
MSI Prestige 14 ၊ Prestige PS341WU ၊ Prestige P100 Creator Desktop
Source: Creator Award Website
GS65 9SD In-depth Review
PlayStation5နဲ့ Xbox Series X တို့ ဘယ်သူပိုစွာလဲ